Chelsea Ayaa Halis Ugu Jirta Inay Seegaan Saxiixa Daafaca Dhexe Bayer Munich Ee Jerome Boateng
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea ayaa halis ugu jirta inay seegaan saxiixa daafaca dhexe Bayer Munich ee Jerome Boateng
December 4, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Daafaca Bayern Munich Jerome Boateng ayaa qirtay inuu ku reebay “layaab” wararka xanta ah ee la xiriirinaya inuu u wareegayo Arsenal iyo Chelsea.
32 jirkaan daafaca dhexe ka ciyaara ayaa sagaalkii sano ee ugu dambeysay la qaatay kooxda heysata horyaalka Jarmalka, isagoo ciyaaray 350 kulan tartamada oo dhan, isagoo kula guuleystay sideed koob oo Bundesliga ah iyo labo Champions League.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka qandaraaskiisa haatan ee Allianz Arena ayaa dhamaan doona xagaaga soo socda, in kasta oo ay jiraan warar xan ah oo sheegaya inuu raadsan karo koox cusub.
Tottenham, Chelsea iyo Arsenal ayaa dhawaanahan lala xiriirinayay inay xiiseynayaan, si kastaba ha ahaatee, daafaca qibrada leh ee khadka dhexe ayaa ku adkeysanaya inuusan u jeedkiisu aheyn inuu ka tago kooxda difaacaneysa horyaalnimada Yurub.
“Qofna iima soo dhowaan, cidna ilama hadlin, waxba kama ogin wax ku saabsan wararka aan maqlaa marwalba, waan la yaabay,” Boateng ayaa u sheegay Suddeutsche Zeitung.
Daafacii hore ee Hertha Berlin ayaa matalay Manchester City intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2010-11, isagoo u ciyaaray 24 kulan Citizens, kula guuleystay FA Cup xilli ciyaareedkiisii ​​kaliya ee Etihad Stadium.
Arsenal iyo Chelsea labadoodaba waxay qatar ugu jiraan inay waayaan Shkordan Mustafi iyo Antonio Rudiger, waxaa labadoodaba lala xiriirinaa in ay u dhaqaaqan Barcelona iyo inay la soo saxiixdaan laacib tayo leh sida Jerome Boateng oo ka caawin kara kooxaha waaweyn ee London inay kordhiyaan guulaha koobabka ay ku haminayaan.